कालापानी क्षेत्रको प्रमाण संकलन गर्न विज्ञ समूह गठन – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१० कार्तिक २०७७, सोमबार ०१:४७ English
कालापानी क्षेत्रको प्रमाण संकलन गर्न विज्ञ समूह गठन
काठमाडौँ, २९ जेठ । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विषयमा प्रमाण संकलन गर्न सरकारले डा. विष्णुराज उप्रेतीको नेतृत्वमा विज्ञ समूह बनाएको छ । मन्त्रि परिषद् बैठकले उप्रेतीको नेतृत्वका नौ सदस्यीय विज्ञ समूह बनाएको सरकारका प्रवक्ता एवम् अर्थ तथा सञ्चार मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
डा. उप्रेतीले दोलखा जिल्लालाई आधार बनाएर सिँचाइ, गुठी जग्गा, पानी र वनसँग सम्बन्धित द्वन्द्व व्यवस्थापनमा विद्यावारिधी गरेका छन् । उप्रेतीले सन् २००१ मा ‘कन्फिल्क्ट म्यानेजमेन्ट इन नेचुरल रिसोर्सेसः अ स्टडी अफ ल्याण्ड, वाटर एण्ड फरेस्ट कन्फिल्क्ट इन नेपाल’ शीर्षकमा शोध गरेका थिए ।
सरकारले उनलाई गत फागुनमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यकारी अध्यक्ष बनाएको थियो ।
२९ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १८:४५ मा प्रकाशित